Njem Wincanton maka ahụike uche - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Njem Wincanton maka ahụike uche
Edere na April 20, 2022 site na BLG Uche Udi: Ego, General
Ndị otu Wincanton footsore na-enweta ezumike nke ọma.
Ụkwụ ụkwụ gbawara agbawa na akpụkpọ ụkwụ ụkwụ gbawara agbawa akwụsịghị ndị otu ụjọ na-atụ ibu njem na ngwa agha. ike Wincanton na-eme njem kilomita iri na anọ iji nweta ego maka BLG Mind na Satọde 14 Eprel.
Dan Oxenham, Onye njikwa otu Transportgbọ njem na ebe nchekwa Thameside, na ndị ọrụ ibe ya setịpụrụ onwe ha ihe ịma aka nke ije site na Oxted ruo Otford n'okporo ụzọ North Downs. Njem ahụ were ha ihe dị ka awa asaa.
Dan kwuru, sị: “Ọtụtụ n'ime anyị merụrụ ahụ na njedebe, gụnyere akpụkpọ ụkwụ a kpọchiri akpọchie na akpụkpọ ụkwụ na-enweghị otu, mana anyị mere ya.
"Ụfọdụ n'ime ụmụ okorobịa ahụ nọ na-eme njem ruo ọgwụgwụ nke ike gwụrụ kpamkpam, ma n'otu oge ahụ na-ajụ m mgbe m ga-ahazi nke na-esote."
Ọ bụ Walk na Talk nke anọ ndị otu ahụ haziri. Dan, onye enyemaka izizi ahụike uche ruru eru, kwuru na ndị ọrụ na-ahụ na njem a bara uru nke ukwuu maka ahụike uche ha.
“Ụmụ okorobịa ole na ole ebe a enwewo mgba ahụ ike nke uche ha na ijegharị na-enyere ha aka n'ezie. Ọ na-enye ha ohere ikwu okwu. Mgbe anyị mechara nnukwu njem ikpeazụ anyị, enwetara m ozi ederede na ozi ịntanetị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo na-asị 'Ị maghị ókè nke ahụ nyeere m aka'."
Foto ụfọdụ sitere na njem ahụ, gụnyere akpụkpọ ụkwụ gbatịrị agbatị.
Wincanton Thameside bụ ndị na-akwado BLG Mind mgbe niile. Na 1 Eprel, Dan na onye ọrụ ibe ya Dominic Reid nwere obi ike na ịsa ahụ na-ekpo ọkụ na ọkụ eletrik dịka akụkụ nke ịma aka Mudder siri ike inweta ego maka ọrụ ahụike uche anyị.
Mudders siri ike: Dan, aka ekpe, na Dom mgbe emechara mmemme ahụ
Dan kwuru, sị: “Snow na-ezo, anyị yikwara obere uwe na T-shirt. Igwe ịsa ahụ nke arctic nwere ike bụrụ nke kachasị njọ, mgbe ahụ Dom nwetara ujo eletrik mgbe ọ kụrụ wires na njedebe. "
Ndị otu Wincanton dị njikere mgbe niile ịkwado onye ọrụ ibe ya na-agbasi mbọ ike na ahụike uche ha.
Dan kwuru, sị: “Ọ bụrụ na mmadụ abịakwute m maka enyemaka, m na-akwụsị ihe niile m na-eme n’ọfịs iji nyere ha aka. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ otu awa ma ọ bụ awa abụọ, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ m, m na-anọnyere ha.”
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịkwado mbọ ị nweta ego Wincanton Thameside, gaba na ha JustGiving peeji.
Maka echiche na ozi gbasara otu nzukọ gị nwere ike isi nweta ego maka anyị, gaa na Kwado Anyị.
Dementia na -eto eto
Izu Uche Dementia
Izu Uche Oria Dementia
Ogba aghara Enyi na Enyi
Ibi na mgbaka
Laghachi na Akụkọ na Ihe Omume
Debanye na Akwụkwọ Akụkọ